အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘဲ၏အိပ်မက်: အလူနေမှုနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်အကြီးအငယ်။ အခြေခံပညာအနက် - အဘယ်အရာကိုအိပ်မက်ဘဲမိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကို
အိပ်မက်အတွက်, လူတစ်ဦးသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်းတစ်ခု, မိတ်ဆွေများ, ရန်သူများကိုနှင့်ကွယ်လွန်သူပင်ဆွေမျိုးများပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘဲ၏အိပ်မက်? ဘယ်အလားတူအိပ်မက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်မည်နည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဘဲ၏အိပ်မက် - အိပ်မက်ထဲတွင်ဘဲ၏အခြေခံအနက် - ဒါမဟုတျပါဘူး ...
နံရံကပျကျွွောငာ 23.03.2017 07.09.2018 အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ၏စာအုပ်
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအနက်ရောင်ပင့်ကူ၏အိပ်မက်, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့အနက်ရောင်ပင့်ကူတွေအများကြီး? အခြေခံပညာအနက်ကိုအဘယျအအိပ်မက်အနက်ရောင်ပင့်ကူ
ပင့်ကူအဖြစ်မှန်ထိတ်လန့်နှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ, များစွာသောတွှေ။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအနက်ရောင်ပင့်ကူ၏အိပ်မက်မက်? ဒီအိပ်မက်ဥပဒ်များနှင့်ဝမ်းနည်းမှု portends ရှိမရှိ? သို့မဟုတ်သူသစ်ကိုစတင်နှင့်တစ်ဦးအဆင်သင့်ရလဒ်ကိုကတိပေးထား? အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအနက်ရောင်ပင့်ကူ၏အိပ်မက် - ...
နံရံကပျကျွွောငာ 22.03.2017 23.04.2018 အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ၏စာအုပ်
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်မိတျဆှေ၏အိပ်မက်: ပျော်ရွှင်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်။ အဆိုပါရည်းစားကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်းအခြေခံပညာအနက်ကိုအဘယျအအိပ်မက်,
အိပ်မက်အတွက်, ပုံစံများနှင့်ဖြစ်ရပ်များတွေ့ဆုံဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါနဲ့ချိန်းတွေ့အမျိုးမျိုးလာအမျိုးမျိုးသောဆွေးနွေးမှုများကိုပင်တိရိစ္ဆာန်များအိပ်မက်ဘဝထံသို့မလာနိုငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါရည်းစားကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုအိပ်မက် - ထိုက်တန်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောရည်းစားများအဘယ်ကြောင့်အိပ်မက် - အခြေခံ
နံရံကပျကျွွောငာ 14.03.2017 23.04.2018 အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ၏စာအုပ်
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအိပ်ရာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်သခွားသီး၏အိပ်မက်? အခြေခံပညာအနက် - သခွားသီးအိပ်မက်အဘယျသို့
အိပ်မက်များတခါတရံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပျော်စရာ။ အိပ်မက်တွေကိုကြောက်လန့်ဖြစ်ကြပြီးအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့ထဲကတစုံတယောက်သောသူသည်ကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်သခွားသီး၏အိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်သခွားသီး၏အိပ်မက် - လတ်ဆတ်တဲ့၏အခြေခံအနက်ကို ...
အဘယ်ကြောင့်ငါးဖမ်း၏အိပ်မက်ကုမ္ပဏီတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း? အခြေခံပညာအနက် - အဘယ်အရာကိုအိပ်မက်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်ငါးများကိုကြီးစွာသောဖမ်း
အိပ်မက်များအနာဂတ်မှာသို့လွန်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယူပါ။ ညစဉ်ညတိုင်း, အိပ်ပျော်ကျဆင်း, သင်ညအချိန်တွင်အိပ်မက်၌ယနေ့ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ တစ်အိပ်မက်ဆိုလိုတာကငါးဖမ်း၏အဘယ်ကြောင့်အိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်ငါးဖမ်း၏အိပ်မက် - ပင်မအနက်သလိုပဲ ...
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးလူစိမ်း၏အိပ်မက်: သဘောကောင်း, လစျြလြူရှုသို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့? အခြေခံပညာအနက် - အဘယ်အရာကိုအိပ်မက်လူစိမ်း
အိပ်မက်များတစ်ခါတစ်ရံမဟုတ်ဘဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကအခြား, အနာဂတ်ကာလအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ - အတိတ်ကာလ။ အချို့သောအိပ်မက်၌သငျပန်းချီကားများစိတ်ကူးစွန့်စားမှုတွေ့နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ အဘယ်အရာကိုအိပ်မက်
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ပတ်ရေအိပ်မက်: ရေလှောင်ကန်ထဲမှာဖန်ခွက်ထဲမှာ? အခြေခံပညာအနက် - အထဲတွင်ရေနစ်သေကုန်ပြီ, ညစ်ပတ်ရေအိပ်မက်ဘာကြောင့်မသောက်ရ
အိပ်မက်များကိုမကြာခဏအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်နှလုံးမှာအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးနောက်အဘယ်သူသည်ထိုလည်းရှိပါတယ်။ Downers, တစ်ဖွဲ့လုံးကသူတို့ကိုမယ့်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်အိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြရန်အကြံပြုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ပတ်ရေအိပ်မက်? စုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်။ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ပတ်ရေအိပ်မက် ...